KAAYYOO KARAA DHEERAA – Beekan Guluma Erena
KAAYYOO KARAA DHEERAA	Beekan Guluma Erena
Asoosama April 12, 2016April 12, 2016ASOOSAMA GABAABAA	7 Comments
64SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
KAAYYOO KARAA DHEERAA
– Aduun gubuu irra taree rifeensa mataa ciinceessee hidda dhiigaa bokoksee gogaa irraan ol yaasee humna fudhatee kan qaama namaa laamsheessuudha.Karaa deemtoonni sadeen beelaa fi aduun
dadhabanii hamma dirqamaan harkifaman
tarkaanfatu. Kaleessas, har’as, dheengaddaas,
boriis deemuu qofa deemsa him xumuramnee fi
kan jalqabamuun isaa nama gaabbisiisuudha.
“Kiristoofar Kolombos illee karaa dheeraa nuffii
malee osoo lafa hin argin bishaanii fi waaqa
ilaalaa obsaan deemee booda biyya guddittii
sana arge mitii?” Jedhee mataa isaan ofii
Moosisaan of duuba garagaggalee hiriyoota isaa
ilaalaa dhaabbatee eege. Sambatoon akka saree
aduun dhahaa ooltee bishaan dheebotteetti
lukluka. Iftuun mudhii ishii huccuudhaan
hidhattee mataa ishiis marattee jirti. Namni
guyyaa muraasaan dura beeku osoo argee
ishiidha hin jedhu gogaan ishii diimaan lallaafu
sun magaala’ee qoree baasaa jira.
Iftuun sanbatoo caalaa dadhabdee miilli isii
lamaan wal rukutaa mormi isii raafamaa kan
kutuuf jirtu fakkaatti.
Sambatoo fi moosisaan waan xixinnoo gateettii
irratti baatanii waan kittaa irratti uffatan
baafatanii mataa isaaniitti marataniif adda
addummaa bifa isaanii malee wal fakkaatu.
Moosisaan “maa! anaaf warraa? Iftuun karaatti
hafuu isiiti” jedhe yaada gaddaatiin abdiin isaa
dukkanaa’ee ijji isaa imimmaaniin guutamee
jireenya isa baqachaa jiru of duuba naanna’ee
Moosisaa fi Iftuun hiriyyummaan turanii jiru.
Mana barumsaa sadarkaa 2ffaatti wal baran
iftuun intala sooreessaa waan taateef itti toleeti
jiraatti. Moosisaan garuu warra waan nyaatanii
bulan illee him qabne irraa dhalate. Jireenyi
isaas kan rakkinaan guutameedha rakkinni ykn
hiyyummaan warra isaa garuu kan isa cimsu
malee kan isa gufachiisuu fi kan hamilee isaa
laaffisu hin turre barumsa isaattiis cimaadha.
Iftuun cimina isaa fi hiyyummaa isaa walumatti
qabdee jaallatte. innis kan qoostu itti fakkaatee
amanuu didullee garuu booda irratti jaalalti ishee
kan dhugaa ta’e.
Dardarri warri ishee filaniif kan dhalootaa fi
qabeenyaan isiin qixxaatu tokko mana isaaniitti
deddeebi’a. Itti haasa’uu fi ofitti qabuu fedha.
Iftuun garuu yeroo inni dhufu mana dhiistee
baati ykn mana hirriibaa isii cufattee rafti.
Booda irratti moosisaa mana fiddee isaaniin wal
barsiiste. Warri ishiis itti aaranii “isatti
heerumtee umrii kee guutuu daaraa nyaachaa
daaraa taatee jiraachuu feetaa? Gaddeebituu!”
“Ani jaalala malee akka isin jettan qabeenyi ana
hin gabroomsu. Jireenyi kan namatti tolu yoo
jaalala of keessaa qabaate malee qabeenyi
jiraateefii miti. Moosisaan hiyyummatti hin hafu
sammuu banaa fi cimina waan qabuuf boru
soorummaan yoo hafe illee of jiraachisuu hin
dadhabu. Qormaata isa olaanaa yoo darbuu
baate kanuma kufee hafu seetan mitii?” Jettee
aarte warri isii jaalala isiif qaban kan irraa
fudhatanii tuffatanii cunqursan itti fakkaate.
Waggaa dhufuttiis moosisaan qormaata
fudhachuuf qophaa’ee iftuuniis horii warra isii
irraa argattuun gargaartee qormaata fudhate.
Garuu hin taane qabxiin fide warra galgala
horiidhaan barsiisuu danda’uuf malee rakkataa
akka isaatiif kan ta’u hin turre.
Ni aare rakkina warra isaa yommuu argu
sammuun isaa boqonnaa dhabde inni yoomiyyuu
gargaaree akka hiyyummaa keessaa hin baasne
hubateeti biyya dhiisee godaanuuf murteesse.
Hiriyaan isaa sambatooniis yoo hamma isaa
rakkataa ta’uu baatees garuu akka waliin
godaanu mirkaneesseef. Horii barbaachisu
argachuufiis dhakaa baatanii horii kuusuu
Moosisaan yaada isaa kana iftutti himee akka
obsaan eegduu fi gaafa waan tokko irra ga’ee
jiraachuu danda’e akka qunnamu itti hime.
Iftuun garuu ni dheekkamte “hin ta’u! Hangasitti
eeguu hin danda’u. Warri koos sooreessatti na
gurguruuf asii fi achi jedhu. Yoo ati deemte na
gurguratu ykn na ari’atu kanaafuu si biraa hin
O!o! Obsi malee giiftii koo ati hin dandeessu.
Geejjibaan booda miilaan karaa fagoo deemna.
“Akka namoonni anatti himan yoo ta’e si dhiisii
anuu kaniin deemee ga’u natti hin fakkaatu”
jedhee sodaachisee achumaan sossobuuf yaale.
“Haa ta’u! Yoon dadhabe godatti kufee maaliif
hin hafne?” Jettee deebisteef hamma dandeessu
Moosisaan balaa isii irra ga’uu danda’u yoo
beekees gaddisiisuu hin feene. Jaalala isaaf
qabduufi walitti bu’iinsa warra isii waliin gotee fi
sababii isaatiin taa’oolaa (irbu dibeessa) ta’uun
isii akka fudhatee deemuuf isa dirqisiise.
Sambatooniis deemsa iftuu ni morme “karaatti
dadhabdee ofiifiis osoo bakka yaadde hin ga’in
nuyis gufachiisti kanaafuu deemuu hin qabdu”
Iftuun garuu “mormi koo haa citu malee hin
hafu.” Jette. Horii sababii sababiitiin warra isii
irraa guurtee kuustee deemsa miilaatiif kan tolu
huccuu ispoortii gurraachaa fi kophee isaaf tolu
qopheessitee yeroon deemsaa ga’ee sagantaan
ba’ee hamma moyyaaleetti geejjiba argameen
deemanii miilaan gara keeniyaa ce’uuf walii
Moosisaan warra isaatti himee isaaniis itti
booyaa, kadhataa, dhiisee ba’e. Sambatoon
garuu xalayaa “Ana hin barbaadinaa” jettu
barreessee dhiiseefii ba’e. Rakkina mudate
dabraa geejjibaan hamma moyyaalee deeman.
Yeroo achi ga’an sadanuu ciccimoo turan fuula
isaanii irrattiis abdii fi kolfaatu dubbifama.
Ganama barii deemsa jalqabanii haasa’aa kolfaa
tiratu. Moosisaan garuu sodaatee jira iftuun yoo
har’a deemaa oolte boru dabaluu isii shakkee
seenaa intala ollaa isaas yaadate.
Intalti gurbaa gurraacha tokko (nama Afrikaa)
irraa jaalalti qabdeetu duukaa biyya isaa
deemuuf kaate. Gurbichi ennaa biyya isaa ga’u
“Deemi Ana Biraa” jedhee ari’e. Booda asii fi
achi jechaa kan jirtu rakkattuu akka isii waliin
wal arkitee gara biyya ofii deebi’aa osoo jiranii
dadhabdee karatti duute hiriyaan isiis magaalaa
dasee keessatti dalagaa hin taane irratti
bobbaatee teessoo dursitee itti himteen warra
isiitiif xalayaa barreessitee du’a intala isaanii
eega itti himte booda “maaloo biyya ofiitii ba’uu
hin hawwinaa biyyaa ba’uu mannaa ija
dunuunfatanii boo’atti of darbachuu wayyaa” kan
jetterraa yaada karaa dheeraa deemuu isaanii
Iftuuniis hamma humni isii dhumutti deemuuf
kitachuu isii dinqisiifate. Kan edge CAALAA
jabaattee arge galaa qabatan nyaatanii bishaan
dhuganii hamma dukkanni bakka dhaalee karaan
itti mul’achuu didutti deemanii karaa bulan.
Barii taan Oslo dadhabbiin kaleessaa hin
lakkisiin bariin ka’anii deemsa jalqaban.
Galaan qabatan xinnaa ture in dhume “karaa
irratti nyaata argannee bitanna” jedhanii turan
karaa irratti nyaanni has hafuu namninuu hin
Horii baay’ee qabatanii beela’uu fi dheebochuu
qaban “amma iddoo ta’e geenyee waa arganna”
ABDII duwwaatiin tiratu.
“Jabaadhu iftuu amma iddoo tokko geenyee
bishaanii fi dhangaa argannaa jabaadhu maaloo”
jedhee moosisaan fuula isaa gogoncooruu qabe
irratti ijji isaa imimmaaniin guutamee jeeqame
dadhabbii isaa irratti dadhabbiin iftuu kan caalu
dadhabsiisee “sambatoo xinnoo haara haa
galfannuu iftuun dadhabdee kufuuf jirtii” jedhee
iftuu hammatee teessise.
” Jabaadhu kaayyoon keenya kaayyoo kolombosi
siin jedheen turee mitii? Akka isaa dadhabbii
booda bakka yaanne ga’uu qabnaa jabaadhu”
jedheetiini hidhii isaa kan dheebuu fi hoo’aan
gogeen gad jedhee dhungate.
Sambatoon lafa akka sibiila ibiddaan
diimeessaniitti nama gubu irratti diriirfatee
dugda isaatiin ciise.
Moosisaan qoodaa bishaanii keessaa bishaan
xuxxuruursee qarqara huccuutiin cuuphaa adda
isii fi laphee isii irra qaqqabaafii osoo jiruuti kan
gaafa tokko daree keessatti dhukkubsatte
“Edaa dhukkuba dadhabbii rukuchaa onnee
qabaachuu isii anatti himtee turte ” jechuudhaan
sodaan itti dhagahame.
Iftuun dadhabaa deemte malee dammaqxee ol
ka’uu hin dandeenye moosisaan harka isaatiin
hiixatee sambatoo sochoose. Sambatoon OK
utaalee “iftuun hamma kana dadhabdee jirtii?”
Jedhee gaafate IJA sukkuummataa “eeyyee
maal wayya? Kana caalaa dadhabaa jirtii”
“Qilleensa ta’aa laata?” Jedhee gaafate
“Miti hafuura qabdi lapheen isii garuu rukutuu
kan dhiise fakkaata miilli isii immoo baay’isee
qorra wayyoo anaatu ajjeese mitii? Ykn bakkaan
yaade hin geenye isiis dhabee kaayyoo koos
dhabuu kooti” jedhee imimmaan isaa irratti
Dhalooti Qubee Qalamaan hojii boonsaarra jiru!
Waljajjabeessinee, harka walqabannee lafa yaadne geenya!!
-Barreessaan: Hamzaa Jemal Mohammed
Talafoona harkaa: 0968346967
Mata Duree: Wareegama Jaalalaaf Siidaa ta’e!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa64SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
QORMAATA SADEE! →
7 thoughts on “KAAYYOO KARAA DHEERAA”	Solan TashomaApril 15, 2016 at 5:12 pmPermalink	kun qabsoo qabsoo caalu hamilee namaa kan jabeessudha.lafa fageenya ilaalurra kayyo ofii fi galma ofii beekun gumaacha guddaa qaba.jabaadhu imalli gariin murtoo gaafata
Reply	Boonsaa GiddisaaApril 23, 2016 at 7:14 pmPermalink	Beekaa nuf jiraadhu want biraa waan jeedhuu hin qabuu
Reply	AnonymousAugust 19, 2016 at 5:02 pmPermalink	Umurii dheeraa waaqayyoo siif haakennu.
Reply	hundee husseinAugust 27, 2016 at 3:01 pmPermalink	rabbii umrii dheera siif haalatu qomookoo jabaadhu siifaana jira
Reply	hundee husseinSeptember 3, 2016 at 2:44 pmPermalink	tole kaa jabaadhu qomookoo
Reply	Murtii AhmedApril 29, 2017 at 6:07 pmPermalink	Ammallee nuf jiradhu
Reply	zingtintucMay 8, 2017 at 7:31 amPermalink	Murtii Ahmed on \_nKAAYYOO KARAA DHEERAA; lencha yigazu on OROMUMMAA FI HABASHAA!